विहीबार जन्मेका मान्छेको भाग्य कस्तो हुन्छ ? जान्नुहोस – Aaj ko Sandesh
फेसबुकबाट,, मायामा लठ्ठै पार्ने ‘सुन्दरी’ त पुरुष पो रहेछन्!
शिशुलाई मा`रेको आ’रोपित आमाजुले मिडियामा आउन मा’निनन, यति सम्म भयो ? (भिडियो हेर्नुस्)
मुख्य पृष्ठ /News/विहीबार जन्मेका मान्छेको भाग्य कस्तो हुन्छ ? जान्नुहोस
सुमोले मोटरसाइकल र ठेलालाई ठ’क्कर दिँदा २ घा’इते